Vinaigrette - isidlo semifino, okuyinto waziwa emhlabeni wonke njengoba isaladi "Russian". Uyazilungisa imikhiqizo elula kakhulu futhi ezingabizi: ukhukhamba, amazambane, izaqathe kanye beet. Futhi igama layo-French aluthola sibonga avale nokuphathelene uviniga namafutha zemifino ekuphekeni ngokuthi Vinaigrette. Ungadliwa wenze lokhu isaladi kukhona ezihlukahlukene. Lesi sihloko ngeke ukhulume kanjani isaladi nge amakhowe.
Izithako for isaladi
"Mushroom" ungakhetha ukudala isidlo kunezinzuzo zako. Lokhu isaladi kunobuciko okukhulu. Ngaphezu kwalokho, isaladi nge amakhowe kungaba ngokuphawulekayo ehlukahlukene ekudleni kwethu ngesikhathi Ebolekwe.
amakhowe fresh - 300 amagremu;
Amazambane - 2-3 nezilimo eziyizigaxa;
beetroot - 1 isiqeshana;
ukhukhamba (elikhulu) - 2 izicucu;
uwoyela Sunflower - 2 isipuni;
usawoti, anyanisi oluhlaza, dill - ukunambitha.
Vinaigrette nge amakhowe. Lungiselela imifino kanye amakhowe
Okokuqala, u-beetroot kanye izaqathe kufanele wageza kahle nge ibhulashi esikhethekile imifino. Ngemva kwalokho, izimpande Kudingeka sibeke ebhodweni bese umboza amanzi. Izinga uketshezi kule esitsheni kufanele ukunqoba imifino cishe amabili ngamasentimitha.
Manje kubalulekile ukunikeza ketshezi ukubilisa ke ukupheka phezu ukushisa ngokulinganisela izimpande ngaphansi ajar isivalo.
Izaqathi kumelwe asuswe pan emva amabili - imizuzu amabili nanhlanu. Ukupheka isikhathi beetroot - ihora elilodwa. Lokho-ke akalilahlile ocebile yayo burgundy umbala uma kuphekwe ketshezi, ungakwazi ukwengeza isipuni kalamula noma uviniga. Ngokushesha ngemva ukulungiswa yemifino ukuba ivinjelwe ngamanzi abandayo. Khona-ke u-beetroot kuyoba lula ukuhlanza.
izimpande selehlile kudingeka ikhasi bese uthathe cubes amancane. Izaqathe kanye beet elixutshwe noma kunjalo engenakwenzeka.
Manje udinga ukugeza amakhowe futhi ome nabo ithawula iphepha noma ithawula elincanyana. Ngemva kwalokho kufanele uthathe amapuleti mncane.
Okulandelayo, udinga ukubeka amakhowe epanini ngamafutha eshisayo upheke kuze ithenda. Ungakwazi ukupheka isaladi nge amakhowe zifakwe emanzini anosawoti. Ukuze wenze lokhu, kufanelekile ibhotela amakhowe, amakhowe, omhlophe noma amakhowe black.
Kulandele ihlanzekile futhi ugeze amazambane. tuber ngayinye kumele unciphe ngesigamu noma zibe yizicucu ezine. Ngemva kwalokho imifino kufanele sigcwale amanzi bese Bilisa. Ukupheka isikhathi kuxhomeke sesitshalo. Wayevame upheka imizuzu cishe abangamashumi amabili.
Manje nezilimo eziyizigaxa selehlile kanye ukhukhamba kufanele uthathe cubes ezincane, nquma anyanisi oluhlaza.
Ukulungiswa isaladi sigqoka ekhethekile
lwesinaphi - 1 itiye spoon;
pepper White - isigamu isipuni;
amafutha sunflower - 1 spoon;
Lemon - 1 isiqephu.
Okokuqala, udinga esitsheni esincane esijulile uthele amafutha isipuni.
Khona-ke kubalulekile ukuba baxhumane usawoti, ushukela, lwesinaphi kanye pepper omhlophe.
Kamuva ngawo lowo umthamo ofanayo udinga uthele ijusi kusukela lukalamula.
Manje yonke into kufanele ibe okuhle kuphazamise kuze ngemfoloko ubebushelezi.
Okugqugquzelwa enjalo Vinaigrette nge amakhowe ukuthola ukunambitheka enkulu futhi engavamile. Amalungu indlela zasendulo ukudla ekulungiseleleni can nje ukunambitheka isaladi nge amafutha sunflower.
Indlela uhlanganise kahle izithako ze isaladi
Lokhu kumele kwenziwe ngendlela ethile.
Okokuqala, udinga ukubeka beet isitsha bese uyalikhipha ne ibhotela elisele. Lokhu kumele kwenziwe ukuqinisekisa ukuthi ezisele izithako isaladi waminza ngombala burgundy.
Khona-ke, endishini kumele ukungezwa ukhukhamba, anyanisi oluhlaza, amazambane kanye izaqathe. Manje konke kufanele zixutshwe kahle.
Manje ungakwazi sihlanganise imifino nge amakhowe futhi sigqoka. Ngemva kwalokho, yonke imikhiqizo kudingeka uhlanganise waphinda ngokucophelela.
Vinaigrette nge amakhowe ngomumo. Indishi engase aklonyeliswe nge amahlumela ngesikele sokuthena ambalwa dill elimnandi. Ukuze ukunambitheka ngaphezulu isaladi piquant, kufanele abeke kuwo uqweqwe lemon.
I isaladi nge amakhowe, iresiphi okwakubekelwa ezichazwe ngenhla, bese wengeza ezinye izithako. Wenziwe nge uphizi oluhlaza, ubhontshisi okusemathinini, sauerkraut, utamatisi, apula ngisho izimbaza.
chef ngamunye kwenza isaladi ukuthi ebona kufaneleka khona. Mhlawumbe yingakho amakhulu amaningi eminyaka isaladi nge amakhowe nobhontshisi ilahlekelwe noyedwa kwayo. Zizwe ukhululekile ukuba ulinge. Futhi uzoba akho isignesha iresiphi izitsha. Bon appétit!
Ikhekhe Quick nge amajikijolo: zokupheka
Abathungela Christmas zokubhukuda lo mfana ngezandla zakhe: incazelo iphethini, imibono
Ama-Movie ngu Ustinova. uhlu ezincwadini